Forbes မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံး အားကစားသမားစာရင်းထွက်ပေါ်လာပြီ
Forbes ရဲ့ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံး အားကစားသမားစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာ ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ မေ၀ယ်လ်သာ Mayweather
7 Jun 2018 . 12:46 PM
နာမည်ကြီး စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ Forbes က ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ၀င်ငွေအကောင်းဆုံး အားကစားသမားစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး အမေရိကန် နာမည်ကျော် လက်ဝှေ့သမားဟောင်း မေ၀ယ်လ်သာ Mayweather ဟာ ထိပ်ဆုံးနေရာကို စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo ဆီကနေ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က လက်ဝှေ့ကစားသမားဘ၀က အနားယူခဲတဲ့ မေ၀ယ်လ်သာရဲ့ ၀င်ငွေက အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၈၅)သန်းအထိရှိခဲ့တာကြောင့် နံပါတ်(၁)နေရာကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ လက်ဝှေ့သမားဘ၀မှာ ပွဲပေါင်း(၅၀)အထိ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ မေ၀ယ်လ်သာဟာ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ပွဲတိုင်း အနိုင်ရခဲ့ပြီး Knock Out နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲက (၂၇)ပွဲအထိရှိခဲ့တယ်။
မေ၀ယ်လ်သာရဲ့ ၀င်ငွေထဲမှာ လက်ဝှေ့ပွဲဆုကြေးက အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၇၅)သန်းအထိ ရှိခဲ့ပြီး တခြား ကဏ္ဍတွေက ရရှိခဲ့တဲ့ ၀င်ငွေက အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀)သန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၊ သြဂုတ်လတုန်းက မက်ဂရီဂေါ် McGregor နဲ့ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ထိုးကြေးတွေကလည်း မေ၀ဲလ်သာရဲ့ ၀င်ငွေ မြင့်တက်လာမှုအတွက် အဓိကအချက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မေ၀ယ်လ်သာဟာ နောက်ဆုံး(၇)နှစ်အတွင်း ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ (၄)ကြိမ်အထိရပ်တည်နိုင်ခဲ့သလို ၂၀၁၄ ခုနှစ် တုန်းကလည်း Forbes ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး အားကစားသမားစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာရရှိခဲ့ပြီး အဲဒီတုန်းက သူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း(၃၀၀)အထိ ရှိခဲ့တဲ့အပြင် အဲဒီပမာဏက စံချိန်တင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ (၂)နှစ်ဆက် ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးအားကစားသမား အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒီနှစ်မှာတော့ အဆင့်(၃)နေရာအထိ ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်။ အဆင့်(၂)နေရာကို စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဘက် မက်ဆီ Messi က ရယူခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ဝင်ငွေက အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၁၁)သန်းရှိခဲ့ပေမယ့် မေ၀ယ်လ်သာထက် တော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း(၁၀၀)ကျော် လျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ကြော်ငြာအပါအ၀င် ကဏ္ဍအသီးသီးကနေ ၀င်ငွေရရှိမှုက အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၄၇)သန်းအထိရရှိခဲ့ပြီး မက်ဆီထက် များပြားခဲ့ပေမယ့်လည်း လစာငွေရရှိမှာတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၁)သန်းသာရှိခဲ့တာကြောင့် မက်ဆီရဲ့လစာငွေထက် နည်းပါးခဲ့လို့ အဆင့်(၃)နေရာအထိ ကျဆင်သွားခဲ့တာပါ။
နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘရာဇီးလ်တိုက်စစ်မှူး နေမာ Neymar လည်း Forbes ရဲ့ ၀င်ငွေ အကောင်းဆုံးအားကစားသမား ထိပ်ဆုံး(၁၀)ဦးစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဆင့်(၅)နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။ ထိပ်ဆုံး(၁၀)ဦးစာရင်းမှာ ဘက်စကတ်ဘောလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေဖြစ်တဲ့ လီဘရွန်ဂျိမ်းစ် LeBron James၊ စတီဖင်ကာရီ Stephen Curry တို့ ပါဝင်ခဲ့သလို ဆွစ်ဇာလန် နာမည်ကြီး တင်းနစ်သမား ရော်ဂျာဖက်ဒရာ Roger Federer အစရှိသူတွေလည်း ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Forbes မဂ္ဂဇင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံး
9. Matt Ryan, $67.3 million (American Football)
10. Matthew Stafford, $59.5 million (American Football)
17. Drew Brees, $42.9 million (American Football)
19. Derek Carr, $42.1 million (American Football)
Forbes ရဲ့ ဝငျငှအေကောငျးဆုံး အားကစားသမားစာရငျးမှာ ထိပျဆုံးနရော ပွနျလညျရယူနိုငျခဲ့တဲ့ မဝေယျလျသာ Mayweather
နာမညျကွီး စီးပှားရေး မဂ်ဂဇငျးတဈစောငျဖွဈတဲ့ Forbes က ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှကျ ဝငျငှအေကောငျးဆုံး အားကစားသမားစာရငျးကို ထုတျပွနျကွညောခဲ့ပွီး အမရေိကနျ နာမညျကြျော လကျဝှသေ့မားဟောငျး မဝေယျလျသာ Mayweather ဟာ ထိပျဆုံးနရောကို စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo ဆီကနေ ပွနျလညျ လှဲပွောငျးရယူနိုငျခဲ့ပါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက လကျဝှကေ့စားသမားဘဝက အနားယူခဲတဲ့ မဝေယျလျသာရဲ့ ဝငျငှကေ အမရေိကနျဒျေါလာ(၂၈၅)သနျးအထိရှိခဲ့တာကွောငျ့ နံပါတျ(၁)နရောကို ပွနျလညျရယူနိုငျခဲ့တာပါ။ လကျဝှသေ့မားဘဝမှာ ပှဲပေါငျး(၅၀)အထိ ထိုးသတျခဲ့တဲ့ မဝေယျလျသာဟာ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးလောကျအောငျ ပှဲတိုငျး အနိုငျရခဲ့ပွီး Knock Out နဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲက (၂၇)ပှဲအထိရှိခဲ့တယျ။
မဝေယျလျသာရဲ့ ဝငျငှထေဲမှာ လကျဝှပှေဲ့ဆုကွေးက အမရေိကနျဒျေါလာ(၂၇၅)သနျးအထိ ရှိခဲ့ပွီး တခွား ကဏ်ဍတှကေ ရရှိခဲ့တဲ့ ဝငျငှကေ အမရေိကနျဒျေါလာ(၁၀)သနျးရှိခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ၊ သွဂုတျလတုနျးက မကျဂရီဂျေါ McGregor နဲ့ထိုးသတျခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ထိုးကွေးတှကေလညျး မဝေဲလျသာရဲ့ ဝငျငှေ မွငျ့တကျလာမှုအတှကျ အဓိကအခကျြဖွဈခဲ့တယျ။ မဝေယျလျသာဟာ နောကျဆုံး(၇)နှဈအတှငျး ထိပျဆုံးနရောမှာ (၄)ကွိမျအထိရပျတညျနိုငျခဲ့သလို ၂၀၁၄ ခုနှဈ တုနျးကလညျး Forbes ရဲ့ဝငျငှအေကောငျးဆုံး အားကစားသမားစာရငျးမှာ ထိပျဆုံးနရောရရှိခဲ့ပွီး အဲဒီတုနျးက သူ့ရဲ့ဝငျငှဟော အမရေိကနျဒျေါလာသနျး(၃၀၀)အထိ ရှိခဲ့တဲ့အပွငျ အဲဒီပမာဏက စံခြိနျတငျဖွဈခဲ့တယျ။
စီရျောနယျလျဒိုအနနေဲ့ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ (၂)နှဈဆကျ ဝငျငှအေကောငျးဆုံးအားကစားသမား အဖွဈရပျတညျနိုငျခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒီနှဈမှာတော့ အဆငျ့(၃)နရောအထိ ကဆြငျးသှားခဲ့တယျ။ အဆငျ့(၂)နရောကို စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ အဓိက ပွိုငျဘကျ မကျဆီ Messi က ရယူခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ဝငျငှကေ အမရေိကနျဒျေါလာ(၁၁၁)သနျးရှိခဲ့ပမေယျ့ မဝေယျလျသာထကျ တော့ အမရေိကနျဒျေါလာသနျး(၁၀၀)ကြျော လြော့နညျးခဲ့ပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ကွျောငွာအပါအဝငျ ကဏ်ဍအသီးသီးကနေ ဝငျငှရေရှိမှုက အမရေိကနျဒျေါလာ(၄၇)သနျးအထိရရှိခဲ့ပွီး မကျဆီထကျ မြားပွားခဲ့ပမေယျ့လညျး လစာငှရေရှိမှာတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ (၆၁)သနျးသာရှိခဲ့တာကွောငျ့ မကျဆီရဲ့လစာငှထေကျ နညျးပါးခဲ့လို့ အဆငျ့(၃)နရောအထိ ကဆြငျသှားခဲ့တာပါ။
နာမညျကြျော ဘောလုံးသမားတဈဦးဖွဈတဲ့ ဘရာဇီးလျတိုကျစဈမှူး နမော Neymar လညျး Forbes ရဲ့ ဝငျငှေ အကောငျးဆုံးအားကစားသမား ထိပျဆုံး(၁၀)ဦးစာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပွီး အဆငျ့(၅)နရောမှာ ရပျတညျနိုငျခဲ့တယျ။ ထိပျဆုံး(၁၀)ဦးစာရငျးမှာ ဘကျစကတျဘောလောကမှာ ထငျရှားကြျောကွားသူတှဖွေဈတဲ့ လီဘရှနျဂြိမျးဈ LeBron James၊ စတီဖငျကာရီ Stephen Curry တို့ ပါဝငျခဲ့သလို ဆှဈဇာလနျ နာမညျကွီး တငျးနဈသမား ရျောဂြာဖကျဒရာ Roger Federer အစရှိသူတှလေညျး ပါဝငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈအတှကျ Forbes မဂ်ဂဇငျးက ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ ဝငျငှအေကောငျးဆုံး